Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Emirates sy Gulf Air: Tsy misy fifaninanana intsony?
Airlines • Aviation • Vaovao Mafana Bahrain • Vaovao Mafana • Vaovao • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao farany UAE
Emirates dia miasa avy any Dubai, Emirà Arabo Mitambatra, raha any Bahrain kosa ny Gulf Air. Samy miantehitra amin’ny fitetezam-paritra ireo mpitatitra. Ny famantarana voalohany ny fiaraha-miasa ary angamba ny maro hafa dia mipoitra ao amin'ny Dubai Airshow.
Emirates sy Gulf Air dia nanao sonia ny Memorandum of Understanding (MoU) mba hampivelatra fiaraha-miasa ara-barotra lalindalina kokoa eo amin'ireo mpitatitra.
Ny MoU dia hametraka ny rafitra misy eo amin'ireo mpitatitra roa ireo mba hananganana fiaraha-miasa amin'ny codeshare manerana ny tambajotran'ny zotram-piaramanidina tsirairay, hanitarana ny tombontsoan'ny tsy fivadihana amin'ny Emirates Skywards sy ny Falconflyer an'ny Gulf Air.
Mandeha ihany koa ny dinika amin’ny fanombohana ny fiaraha-miasa amin’ny entana.
Nosoniavina tamin'ny andro voalohany amin'ny Dubai Airshow, ny MoU dia hanamarika ny fiandohan'ny fifandraisana akaiky eo amin'ny zotram-piaramanidina roa. Ny MoU dia nosoniavin'i Sir Tim Clark, filohan'ny Emirates Airline ary ny lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny Gulf Air, kapiteny Waleed AlAlawi. Nanatrika ny fanaovan-tsonia ihany koa ireo mpikambana ao amin’ny ekipan’ny mpanatanteraka ny kaompania tsirairay avy.
Ireo mpanjifa mandeha amin'ny sidina fiasan'ny Emirates sy ny Gulf Air dia afaka mamandrika fitsangatsanganana tapakila tokana miaraka amin'ny saran-dalana mifaninana, ary fisavana entana iray mijanona mankany amin'ny toerana halehany. Amin'ny voalohany, ny Emirates dia hametraka ny kaody amidy "EK" amin'ny sidina ataon'ny Gulf Air eo anelanelan'i Bahrain sy Dubai, ary ny Gulf Air dia hanampy ny kaody amidy "GF" amin'ny lalana Emirates.
Sir Tim Clark, Filohan'ny Emirates Airline dia nilaza hoe: "Faly izahay miara-miasa amin'ny Gulf Air amin'ny fampivoarana ity fifanarahana codeshare ity, izay hanome safidy tsara kokoa ho an'ny mpanjifa, fandaharam-potoana mety, ary fahafaha-manao fifandraisana eo anelanelan'i Dubai sy Bahrain, ary any an-dafin'ny tanàna amin'ny tambajotra lavitra lavitra anay. . Mino izahay fa hitondra tombontsoa marina ho an’ny mpanjifa sy ny orinasanay ny fiaraha-miasa vaovao ataonay, ary dingana tsara eo amin’ny fiaraha-miasanay ny fifanarahana anio, ary eo an-dalana hanamafisana kokoa ny fifandraisantsika amin’ny ho avy.”
Mandritra ny hetsika. Hoy ny lehiben'ny mpanatanteraka ny Gulf Air: "Ity dia fiaraha-miasa miavaka eo amin'ny iray amin'ireo zotram-piaramanidina voalohany ao amin'ny faritr'i Golfa ary iray amin'ireo mpitatitra lehibe indrindra eran-tany. Faly izahay mikaroka fotoana miaraka amin'ny Emirates mba hanitarana ny tanjonay ary manitatra ny serivisy boutique amin'ny mpandeha Emirates rehefa manidina amin'ny tambajotranay. Ny Gulf Air sy Emirates dia miasa amin'ny sidina maromaro eo anelanelan'i Bahrain sy Dubai ary ity fifanarahana ity dia hanome safidy bebe kokoa ho an'ny mpandeha any an-dafin'ny foibenay. "
Raha vao mihetsika ny codeshare dia afaka mamandrika ny diany miaraka amin'ny zotram-piaramanidina roa ny mpanjifa emirates.com ary gulfair.com, amin'ny alàlan'ny masoivoho fitsangatsanganana an-tserasera ary koa miaraka amin'ireo masoivoho fitsangatsanganana eo an-toerana.